Nahatraran’ny mpitandro filaminana fitaovana tahaka ny tady sy fehivava ary zavatra hafa izy ireo. Niakatra fampanoavana tamin’ny herinandro ny raharaha ary samy miandry ny fitsarana azy any am-ponja izy 5 ireo raha ny tafa manokana tamina loharanom-baovaon’ny zandarimariam-pirenena any an-toerana. Etsy an-daniny, mitantara ny tranga sy ny vokatry ny fanadihadiana ny seraseran’ny polisim-pirenena fa ireo roa vavy no voasambotry ny polisy misahana ny sisin-tany miasa tany amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Nosy-Be Hell ville, ny 22 aogositra 2019 teo noho ny resaka fanondranana an-tsokosoko “Lingo d’or”.
Mpiasa amina fitaterana ana habakabaka iray izy roa vavy ireto ary nitondra “lingo d’or” haondrana any ivelany. Efa misy olona miray tsikombakomba aminy mpanatitra ilay entana eny amin’ny seranam-piaramanidina ka izy roa vavy mpiandraikitra ny fanadiovana no mitondra izany ao anatin’ny fiaramanidina ary apetrak’izy ireo ao amin’ny toerana fidiovana. Efa fanintelony amin’izao izy ireo no nanao io asa ratsiny io ary karamaina 2 000 000 ariary isaky ny fanondranana. Mitohy ny fanadihadiana ho an’ireo mpiray tsikombakomba amin’izy roa vavy sy iretsy telo lahy nikasa handratra azy ireto.